August 12, 2019 - ThutaSone
အထူးမှာကြားချက်ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်
August 12, 2019 ThutaSone 0
အထူးမှာကြားချက်ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင် ခရီးသွားအများပြည်သူများခင်ဗျား…မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်ကိုယ်နှင့်မသိသော-မရင်းနှီးသော ဆိုင်ကယ်-သုံးဘီး-အငှားယာဉ်များဖြင့်…. ညပိုင်းတွင် (လုံးဝ) (လုံးဝ) အခြားနေရာများသို့ အထူးသဖြင့် #ကားကြီးဝင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကယ်ရီဖြင့် မကူးပြောင်းကြပါရန်…. နံက်မိုးလင်းသည်အထိ နီးရာဆိုင်တွင် စားသောက်၍ အနားယူနေကြပါရန်….. အကယ်၍ အချိန်လင့်ညပိုင်းတွင် သင်မသိသော ကယ်ရီ […]
လာရောက်လှူဒါန်းသူတွေ အတွက် ရင်ဝကို စောင့်ကန်ခံလိုက်ရ သလိုပါပဲ
လာရောက်လှူဒါန်းသူတွေ အတွက် ရင်ဝကို စောင့်ကန်ခံလိုက်ရ သလိုပါပဲ ကျိုက်မရော ရေဘေးသင့်ဒေသသို့ ကူညီလိုသူများအတွက် မော်လမြိုင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မှ ယနေ့ ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် လတ်တလော စားသောက်ရေး အဆင်ပြေဖို့ ကနဦးအနေဖြင့် ရိက္ခာများခက်ခက်ခဲခဲ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါပြီး။ ဒါတောင် မြို့ထဲဘက်ပါ။ တချို့ရွာတွေ ထမင်းထုပ်မရောက်တာ ၂ ရက် […]
ရင်​နာစရာ ဘဝ​တွေရေကြီး​မြေပြို​ ဒုက္ခ​တောထဲမှာ ထမင်​းတစ်​ထုပ်​ (၂)ထောင်​ပေး ဝယ်​စား​နေရ
ရင်​နာစရာ ဘဝ​တွေရေကြီး​မြေပြို​ ဒုက္ခ​တောထဲမှာ ထမင်​းတစ်​ထုပ်​ (၂)ထောင်​ပေး ဝယ်​စား​နေရ မြန်​မာပြည်​ရဲ့ တနသာင်္ရီတိုင်​းနဲ့ မွန်​ပြည်​နယ်​မှာ နှစ်​​ပေါင်​း ၆၀ ​ကျော်​အတွင်​း အဆိုးရွားဆ​ုံး ​ရေကြီး၊​ရေလျံှ၊ ​ရေမြုပ်​တဲ့ဒဏ်​ကိုခံစား​နေရပြီး ​ရေးမြို့မှာဆိုရင်​ မြို့ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်​နှုန်​းက​နေ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်​းအထိဟာ ​ရေ​အောက်​​ရောက်​လုနီးပါးဖြစ်​​နေပြီလို့ ​နေ့စဉ်လို ​သတင်​း​တွေကြားသိ​နေရတာဟာ အင်​မတန်​ဝမ်​းနည်​းစိတ်ထိ​ဖွယ်​ရာ​ကောင်​းလှပါတယ်​။ […]
“အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် အကုန်သေပြီ” မြေပြိုသည့်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ကင်းတောင်ရွာသား ဦးချစ်ဝင်း “တရေးနိုးလာတဲ့အချိန်မှ တဝူးဝူးနဲ့ အသံကြားနေတယ်။ အစက မုန်တိုင်းထင်နေတာ။ ပင်လယ်နဲ့လည်း နီးတာကိုး။ အဲဒါနဲ့ နားထောင်နေတုန်း ဘိန်းဘိန်း ဘိန်းဘိန်းနဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးပြိုကျနေပြီ ခေါင်မိုးပြိုကျနေပြီဆိုပြီး ဘုရားခန်းထဲဝင်မီးဖွင့်တော့ အိမ်ထဲကို မြေတွေ ကျောက်တွေရောက်နေပြီဆိုတာသိရပြီး အဲဒါမှ ကလေးတွေကို […]
မိန်းကလေးတွေ သတိထားကြပါနေ့လည်ခင်းကြီးတောင် သောင်းကျန်းနေကြတာ
နေ့လည်ခင်းကြီးတောင် သောင်းကျန်းနေကြတာမိန်းကလေးတွေ သတိထားကြပါ ဒီနေ့ 12.8.2019 နေ့လည် 2:09 မိနစ်ခန့်က မန္တလေးမြို့၊ 73 လမ်းနဲ့ သဇင်လမ်းထောင့်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အခြားဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ငြိပြီး ဟန်ချက်ပျက်ကာ “လုသွားလို့ လုသွားလို့” အော်ပြီး အကူအညီတောင်းနေတာ ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့လို့ ကျွန်တော့်ကားရယ် အခြားကားတစ်စီးရယ် နှစ်စီးပေါင်းပြီး နောက်ကနေလိုက်ဖမ်းပေးတာ […]
နွားတင်ယာဉ်မန္တလေး-မူဆယ် လမ်းမကြီးတွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရပြန်၊ (၁) ဦးသေဆုံး
မန္တလေး-မူဆယ် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွင် နွားတင်ယာဉ် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရပြန်၊ (၁) ဦးသေဆုံး သီပေါ၊ သြဂုတ် ၁၂(သတင်းတမန်) – ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မန္တလေး-မူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတွင် နွားတင်ယာဉ် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရပြီး တစ်ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက အဆိုပါလမ်းပိုင်းရှိ သီပေါမြို့နယ်အတွင်း စံလောင်းရွာနှင့် ကုံးမုံကျေးရွာအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် နွားတင်ယာဉ်မောင်းနှင်လာသည့် […]
ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံလှူဒါန်းနေတဲ့ ချမ်းချမ်း
ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံလှူဒါန်းနေတဲ့ ချမ်းချမ်း ချမ်းချမ်းက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ခံစားနေရတဲ့ မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေဆီသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ရေးမြို့သို့ သွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ချမ်းချမ်းက ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အလှူလိုက်ခံပြီး ဒီနေ့ (သြဂုတ်လ၁၂ရက်)နေ့မှာ မွန်ပြည်နယ်ဘက်သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ […]
မွန်ပြည်နယ်က ရင်နင့်ဖွယ် အဖြစ်ဆိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် ရော ဝန်ထမ်းတွေပါ အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုတဲ့ထဲ ပါသွာ
မွန်ပြည်နယ်က ရင်နင့်ဖွယ် အဖြစ်ဆိုးဆိုင်ပိုင်ရှင် ရော ဝန်ထမ်းတွေပါ အရှင်လတ်လတ် မြေပြိုတဲ့ထဲ ပါသွာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းသလောက် ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရလောက်အောင် အားလုံးကို ရက်စက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ မွန်ပြည်နယ်လေးကတော့ သဘာဝဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလို ဒဏ်ရာရှိသူတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ အဲဒီထဲကမှ ပိုပြီးရင်နာဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်လေးကတော့ HIGHWAY […]
မြန်မာပြည်ကို ဦးတည်တဲ့အလျား မိုင် ၂၀၀၀၊ အနံ မိုင် ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ ရေငွေ့အပြည့် တိမ်ထုကြီး
မြန်မာပြည်ကို ဦးတည်တဲ့အလျား မိုင် ၂၀၀၀၊ အနံ မိုင် ၅၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ ရေငွေ့အပြည့် တိမ်ထုကြီး အလျား မိုင် ၂၀၀၀၊ အနံ မိုင် ၅၀၀ ဝန်းကျင် ရှိ ရေ ငွေ့အပြည့် တိမ်ထုကြီးသည် မြန်မာပြည်ကို ဦးတည်ပြီး ၁ နာရီ […]
ပုုဂံ-ရန်ကုန်် မီးရထားသံလမ််း တံတားကျိုးသဖြင့်် မီးရထားလမ်း ပိတ််ထားရ
ပုုဂံ-ရန်ကုန် မီးရထားလမ်း ချောင်းရေတိုက်စားခံရသဖြင့် ယာယီိပိတ်ထားရ ပုုဂံ-ရန်ကုန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ ရထားလမ်းပိုင်း ညောင်ဦးမြို့နယ် ပုဂံဘူတာနဲ့ တောင်ဇင်းဘူတာ အကြား တံတားအမှတ်(၁၃၅)ကို်ိ သြဂုတ် ၁၀ ရက် ညနေက မိုးရေတိုက်စားပြီး ဒေါက်တိုင်တွေ တိမ်းစောင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဖြတ်သန်းမှုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။ မိုင်တိိုင်က ၃၈၇/၂၂ တံတား က ပေ ၁၂ဝရှိတာ […]